«Nahoana no izy…?» -
AccueilTresaka«Nahoana no izy…?»
«Nahoana no izy…?»
29/06/2017 admintriatra Tresaka 0
Mahalasa saina ihany ilay grenady nisy nametraka teo amin’ny parking an’ny ministeran’ny Fizahantany omaly. Iarahantsika mahalala sy mahafantatra fa Roland Ratsiraka no minisitry ny Fizahantany. Dia mipetraka ny fanontanian’ny mpanara-baovao manao hoe: “Nahoana no izy, nahoana no tao aminy no nisy nametraka grenady?”.
Nahoana no amin’izao ora sy fotoana mampisy ireo grevy isan-karazany ireo izao no nitrangan’izany fametrahana grenady tao amin’ny ministeran’ny Fizahantany izany? Fampihorohoroana mantsy no dikan’izany ka inona no antony hampihorohoroana ny ministeran’ny Fizahantany amin’ny fitokonan’ny Ladoany na izay mety ho fitokonana hataon’ny SMM? Tsy misy ifandraisany mihitsy sa misy manana tombontsoa hampihorohoro ny minisitra Roland Ratsiraka amin’izany?
Koa nahoana àry no tao amin’ity ministera ity no nametrahan’ny sasany izany grenady izany e? Marina tokoa aloha fa ho betsaka ny hiresaka io zava-nitranga omaly io amin’ity androany ity mba tsy hilazana hoe hifantoka any amin’ny ministeran’ny Fizahantany sy ny minisitra Roland Ratsiraka avokoa ny resaka sy ny fosafosan’ny olona. Tsy olana mihitsy izany, malalaka ny fanehoan-kevitra eto amin’ny firenena ary samy manana ny fahitany sy ny andikany azy avy ny tsirairay. Na izany aza manitikitika sy mahavariana izao fihetsika izao.
Misy milaza sahady mantsy any anaty facebook any fa hoe “ampihorohoroan’ny fitondrana hono ny minisitra Roland Ratsiraka satria kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2018”. Dia inona no ilàna grenady hampihorohoroana azy amin’izany? Aleo hifidy izay hitany fa nahavita teto amin’ity firenena ity ny vahoaka dia izay! Ny voka-pifidianana irery ihany no milaza ny marina, ny voka-pifidianana irery ihany tsy misy afa-tsy izay!
Taorian’ny fihaonana fifanatrehana voalohany tao amin’ny TVM tamin’ny mpifanandrina taminy amin’ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa, nisafidy ny nihaona tamin’ny vahoakan’i Toliara sy Taolagnaro, ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, omaly. Tomefy olona hatrany izay toerana ...Tohiny